Vamwe Votya Kumutsiridza Magwaro Avo muSouth Africa.
Vamwe vevanhu vaitsvaga hupoteri muSouth Africa.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvine magwaro ano zvibvumidza kugara muSouth Africa panguva yazvinenge zvakamirira kuti nyaya dzazvo dzekutsvaga hupoteri munyika iyi dzinzwikwe zvinonzi zvave kutya kunomutsiridza magwaro aya nekuda kwekuwanda kwevanhu vanonzi vari kusungwa vachizodzoserwa kumusha.
Sangano iri rinoti vamwe vevanhu vari kukandwa kuLindela ava vari kuzopedzisira vabata zvirwere nekuda kwemagariro ari kuitwa mukamba umu, uyewo kuti vari kurasikirwa nemabasa pamwe nekuparadzaniswa nemhuri dzavo.
Zimbabwe Exiles Forum inotiwo danho rekusungwa pamwe nekudzoserwa kumusha iri rave kuita kuti vanhu vaite zvehuwori senzira yekuti vasaendeswe kuLindela, izvo zvave kupa kuti vakawanda vasarudze kugara vasina magwaro acho.
Munhu akanyorera magwaro ehupoteri anonzi anopiwa gwaro rinomubvumidza kugara kwemwedzi mitanhatu akamirira kuti nyaya yake inzwikwe, asi kazhinji nyaya dzakadai dzinotora nguva yakareba, izvo zvinozoita kuti mwedzi mitanhatu iya ipere pasina chaitwa.
Izvi zvinenge zvave kureva kuti munhu achadzokera zvakare kunoti hupenyu hwegwaro rake huwedzerwe zvakare nemimwe mwedzi mitanhatu, panonzi ndipo pari kubva pasungwa vanhu vachidzorerwa kumusha.
Studio 7 yakundikana kunzwa divi rebazi rezvemukati menyika yeSouth Africa panyaya iyi, sezvo vanzi ndivo vanobvumidzwa kutaura pamahofisi ari muJohannesburg vanzi vanga vari mumusangano.
Asi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZimbabwe Exiles Forum, VaTino Mambeu vanoti kazhinji chinoitika ndechekuti bazi remukati menyika iri rinenge ratotora kare danho raro pamusoro pechikumbiro chemunhu chekuti apiwe hupoteri.
VaMambeu vanoti vebazi iri vanobva vangotora mukana uyu kukudza kuti hauna kubudirira kuwana hupoteri.
"Saka vanobva vatosainisa munhu mafomu okuti tave kutokudzorera kumusha panguva imwechete iyoyi. Saka ichokwadi. saka kutya kunobva kwavepo ndekwekuti munhu anenge asingazivi kuti decision iri kumberi yakamira sei," VaMambeu vanodaro.
Hurukuro naVaTino Mambeu